Iyo yewebhu chikamu cheMac Pro Archives zvimwe zvirimo | Ndinobva mac
Apple yave neakafanana Mac Pro kwenguva yakareba uye parizvino isu tine zvishoma kana hapana chiratidzo cheinogona kuita shanduko kunze kweiyi "snitch" diki iyo inogona kunge iri yekuchengetedza mamwe mapeji pawebhusaiti yeApple. izvo zvinoreva izvo maficha, kududzirwa uye mashandiro eMac Pro.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti isu hatina kuwana Hapana kana shanduko imwechete kune iyi Mac Pro kubvira payakatangwa muna2013, saka zvinofanirwa kutarisirwa kuti munguva pfupi iwe unokwanisa kuona kumwe kufamba neApple kune ino bhizinesi chikamu icho chakaraswa nhasi nekuda kwechikamu cheveruzhinji.
Kana tikatarisa kumashure tinogona kuona kuti runyerekupe pamusoro pekugona kugadziridzwa kana shanduko dzakanzwika sei mumambure panguva yeiyo OS X El Capitan inoshanda system kuvhurwa ingangoita mwedzi gumi yapfuura, asi zvese izvi zvave pasina uye vashoma vashandisi vanofunga kuti Apple iri kushaya chikamu chakakosha chemusika wehunyanzvi uyo unotsvaga makomputa ane simba. Iva zvazvingaite, iyo Mac Pro iri pamugumo wehupenyu hwayo uye inoda shanduko.
Pawebhu Apple inotsigira webhusaiti iwe unogona kuona akasiyana mapeji mune iyo phrase inowoneka "Chinyorwa ichi chakachengetwa uye ruzivo haruna kuvandudzwa" uye ichi chinogona kuve chiratidzo chekuchinja. Iko shanduko inogona kuve iri nani kana yakaipa nekuti hapana ruzivo kana makuhwa akasimba zvakakwana kuti vafunge kuti vachachinja dhizaini yeMac Pro iyi, asi kana vachigona kugadzirisa madoko nezvimwe zvinhu gore rino ...
Zvese izvi apo izvo zvinotarisirwa zvechokwadi shanduko muMacBook Pro yemwedzi uno waGumiguru ndipo Apple paino gadziridza maMacs avo.Tichafanirwa kuve nemoyo murefu uye tione kana Apple ichizonyatsoisa parutivi chikamu chehunyanzvi nekusiya (zvakanyanya kana zvichikwanisika) kana nekusiyana nazvo zvinotishamisa nekuvhurwa kweMacs matsva mwedzi unouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Mac Pro » Chikamu chewebhu cheMac Pro zvinochengeterwa zvimwe zvirimo
Aldo Fabrizzio akadaro
Mune ruzivo rwako, kana gore rino vakaita zvigadziriso kuMac Pro, ungave mwedzi upi? Zvikasadaro isu taifanira kumirira rinotevera gore?
Pindura kuna Aldo Fabrizzio
Iyo Mac App Store inowedzera iyo nguva yasara yekupedzisa kurodha pasi